२०७४ भदौ ३ शनिबार ०७:५०
डा. सबिना भट्टराई –
गर्मी याममा शरीरमा पसिना आउनु नराम्रो कुरा होइन । यसले शरीरलाई शान्त राख्न तथा शरीरको तापक्रम घटाउन मद्दत गर्छ । एक हिसाबले शरीर संरक्षणको लागि सुरक्षात्मक संयन्त्र पनि हो ।
पसिना आयो भने शरीरलाई शितल हुन्छ, तर धेरै पसिना आयो भने रोग लाग्छ । यसलाई हाइपर हाइड्रोसिस् भनिन्छ ।
पसिना आउने अवस्था
धेरै गर्मी भयो भने
नसाको समस्या भएको, चिन्ता लागेमा
पसिना पानी जस्तै हो, रंगरहित, गन्ध रहित, तर यसमा जब किटाणुको संक्रमण हुन्छ तब यो समस्याको रुपमा विकसित हुन्छ ।
पसिना शरीरको सबै भागमा आउँछ तर शरीरका कुनै कुनै अंगमा मात्र गन्हाउँछ । खुट्टाको काप, काखी, कास जस्ता ठाउँ बढी गुम्सने भएकोले फङ्गसको संक्रमण हुने हुन्छ । पसिना सुक्न पाउँदैन र गन्हाउँछ । पसिना गन्हाउने समस्या जसलाई हुन्छ, त्यो मान्छेलाई थाहा हुँदैन ।
पसिनाको गन्धले वरपर बसेका मानिसलाई सकस हुन्छ, बेहोस होला जसरी गन्हाउँछ । तर जसको पसिना गन्हाउने समस्या छ, त्यो मानिसको नाकले गन्धलाई पचाईसकेको हुन्छ र थाहा पाउँदैन ।
पसिना गन्हाउने समस्याको समाधानका लागि सँगैको साथीको मुख्य भूमिका हुन्छ, आफ्नो साथीको पसिना गन्हाएको छ भनेर भनिदिनु पहिलो उपचार हो । पसिना गन्हाउने प्रमुख कारण भनेको सरसफाईको कमी हो ।
पसिना आउँदा के गर्ने त ?
दिनहुँ लुगा फेर्ने ।
दिनहुँ नुहाउने ।
दिनहुँ जुत्ता, मोजा फेर्ने ।
लुगा, जुत्ता घाममा सुकाउने ।
पसिना सोस्ने खालका लुगा जस्तै सुतीको कपडा लगाउने ।
शरीरको तापक्रम कम गर्ने उपाय अपनाउने ।
शरीरलाई सुख्खा राख्न पाउडर लगाउने ।
पसिनाको गन्ध नआओस् भन्नको लागि डियोड्रेन लगाउने ।
फिटकिरीको प्रयोगले संक्रमणलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।
चिकित्सकको सल्लाह लिन जरुरी छ ।
पसिनालाई स्थायी रुपमा नै हटाउन सकिन्न । त्यसको लागि पसिना उत्पादन गर्ने नशालाई नै निकालेर फाल्नु पर्छ यो ठूलो शल्यक्रिया हो । अस्थायी रुपमा आइनाटोफोरोसिस, अर्थात करेन्टको माध्यम तथा बोटक्स इन्जेक्सन दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
पसिना आएमा मानिसलाई आत्मबल कम हुन्छ । यसले लुगामा दाग देखिने हुँदा समस्या हुन सक्छ । पसिना आउनु समस्या होइन तर धेरै आएर गन्हाउनु समस्या हो ।
(काठमाडौं मेडिकल कलेजकी छाला, यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. सबिना भट्टराईसँग सुजाता खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)